Mogadishu Journal » Shir looga hadllayo toosinta fahamka qaldan ee laga qaatay Diinta Islaam-ka oo saakay ka furmaya magaalada Muqdisho
Mjournal : — Waxaa lagu wadaa in maanta uu si rasmi ah uga furmo hotelka Jasiira ee magaalada Muqdisho shir looga hadlli doono fahamka qaldan ee laga qaaday diinta Islaam-ka, kaasoo ay ka qeyb-galli doonaan culima’udiin isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Shirka ayaa waxaa soo qaban-qaabisay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana looga hadlli doonaa siweynna loogu faaqidi doonaa mudada shanta cisho ah ee uu socdo sida qaldan ee Diinta Islaam-ka loo fasirayo, iyadoo ujeedada laga leeyahay tahay in lagu gaaro dano gaar ah iyo mid siyaasadeed.
Qaban-qaabiyayaasha shirka ayaa sheegay in mudada uu shirka socdo sidoo kale looga hadlli doono sidii loo saxi lahaa fahm-ka qaldan ee laga bixiyay diinta iyo waliba in gaar ahaan dhalinyarrada da’da yar si toos ah loogu sheego dhab ahaan waxa ay shareecada Islaam-ka qabto.
“Qaar ka mid ah dadka si qaldan ayeey diintaa u fahmeen, waxaana aragnay in laga raadinayo qofka gaalka ah minbarka ama masaajidka, taasoo dhibaato dhinaca fahamka diinta ah ku keentay bulshadeenna, waana taas midda aan doonayno inaan tashwiishka ka bixinno,” ayuu yiri mid ka mid ah xubnaha qabanqaabinaya shirka.
Marka la eego Soomaaliya mudo dheer waxaa ka jiray kala duwanaasho dhinaca fahamka diinta Islaamka ah oo u dhexeysay culummada Soomaaliyeed, taasoo keentay inay eedeymo kala duwan isku mariyaan warbaahinta.
Sidoo kale, waxaa xusid mudan in dhibaatada xiligan ka taagan Soomaaliya ee dilalka iyo waliba qaraxyada isugu jira yihiin kuwo diin lagu saleynayo, inkastoo ay jiraan culimo arintaa siweyn uga soo horjeeda.